I-LG K40 kunye ne-LG K50: Ukucaciswa ngokusesikweni kolu luhlu kuphakathi | I-Androidsis
I-LG iya kuba lolunye lweempawu eziza kubakho kwi-MWC 2019, apho iya kubonisa ukuphela kwayo okuphezulu kunye nefowuni emangalisayo akufuneki ubambe ukuze uyisebenzise. Nangona uphawu lwaseKorea alufuni kulinda isiganeko esiseBarcelona ukubonisa iindlela ezintsha. Kuba basishiya neefowuni zabo eziphakathi eziphakathi eziphakathi, i-LG K40 kunye ne-LG K50. Iimodeli ezimbini esinazo iinkcukacha zazo ezipheleleyo.
Olu luhlu lutsha lwenkampani lumele ukukhuselwa emkhosini. Sele iyindawo eqhelekileyo kwii-smartphones zenkampani. Ngaphandle koko, ezi LG K40 kunye neLG K50 Abakushiyi neemvakalelo ezimbi ngokubhekisele kwiimpawu zobuchwephesha. Yintoni esinokuyilindela kubo?
Ezi modeli zimbini zinezinto ezifanayo, nangona zinomahluko ophawulekayo. Ingakumbi kwicandelo leekhamera Siyawubona umohluko phakathi kwezi LG K40 kunye ne-LG K50. Kodwa bayathembisa ukuba lukhetho olufanelekileyo kweli candelo liphakathi kwi-Android. Ingakumbi kwabo bafuna umgangatho kunye nokuchasana okukhulu.
1 Ukucaciswa kwe-LG K40
2 Ukucaciswa kwe-LG K50
Ukucaciswa kwe-LG K40
Eyokuqala kwezi zimbini ii-smartphones ezithi zivezwe luhlobo lwaseKorea yi-LG K40. Singayibona njengoyena mntu uthozamileyo kwezi zinto zimbini. Ngelixa ithembisa ukunika intsebenzo elungileyo kubasebenzisi. Oku kukucaciswa kwayo, kutyhilwe ukuza kuthi ga ngoku:
IsikriniI-5,7-intshi ye-FullVision ene-HD + isisombululo kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo: Iibhola ezisibhozo kwi-2GHz
Ukugcina ngaphakathi: I-32 GB (Iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-2 TB ene-microSD)
Cámara traseraI-16 MP
Ibhetri: I-3.000 mAh
Conectividad: 4G, iWiFi, iBluetooth kunye nephonephone jack
abanyeUmfundi weminwe, iqhosha loMncedisi kaGoogle, ukhuseleko lwe-MIL-STD 810G, Isandi se-DTS: X 3D Jikeleze
UbukhuluUbukhulu: 153,0 x 71,9 x 8,3 mm
Le modeli ilula kwezi zimbini. Sifumana isikrini esincinci kule meko. I-LG ayisebenzisanga inotshi kuyo, into ngokuqinisekileyo abasebenzisi abaninzi bayayixabisa. Iza nendibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Indawo yokugcina esinokuyandisa ngokubonga kwi-microSD.
Ibhetri yale LG K40 inomthamo we-3.000 mAh, enokuthi ngokomgaqo kufuneka yanele isixhobo. Ayaziwa ukuba iya kubiza ngokukhawuleza okanye cha. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nezi zixhobo zinokuvezwa kwiintsuku ezimbalwa. Ngokubhekiselele kwiikhamera, esi sixhobo siza kunye nesenzi sangaphambili kunye nesemva.
Eminye, sifumana umfundi ongasemva weminwe, lo mkhuselo ukhankanywe ngasentla emkhosini, Kunye neqhosha elibonakalayo loMncedisi kaGoogle. Ikwakhona kule LG K40, kwaye iya isiba yinto eqhelekileyo kwii-smartphones zohlobo lweKorea.
Ukucaciswa kwe-LG K50
Kwindawo yesibini siyifumana le LG K50. Esi sixhobo sikhulu noko kunesokuqala, ukongeza ekubeni nekhamera ngasemva kabini. Ke ngoko, siyabona ukuba linyathelo elingaphezulu kwesixhobo sangaphambili. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwefowuni:
IsikriniI-6,26-intshi ye-FullVision ene-HD + isisombululo kunye ne-19,5: 9 ratio
i-ram: I-3 GB
Ubukhulu: 161,3 x 77 x 8,7 mm
Umahluko ophambili kunye nokunye ukugxila kwescreen esikrinini sayo, ukongeza kubungakanani kule LG K50 Sinobukho benotshi, ngohlobo lwethontsi lamanzi kuyo. Isikrini esikhulu, esithatha uninzi lwangaphambili. Akukho nto ikhankanyiweyo, kodwa kubonakala ngathi ezi zixhobo zimbini zisebenzisa iprosesa efanayo.
Nangona kule LG K50 sine-RAM enkulu, nangona iza nendibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa. Sineqhosha loMncedisi kaGoogle, ukhuseleko olufanayo emkhosini kunye nobukho benzwa yeminwe kwifowuni. Ibhetri yayo inkulu ngokuthe ngcembe kunaleyo yenye imodeli, enobungakanani be3.500 mAh.
Emuva sifumana ikhamera ephindwe kabini, 13 + 2 MP kule meko. Ngokungafaniyo nenye imodeli enesenzi esinye. Kwakhona, ikhamera yayo yangaphambili ingcono kule meko nayo.
Nangona sinazo zonke iinkcukacha, okwangoku akukho lwazi ekusungulweni kwale LG K40 kunye ne-LG K50 kwintengiso. Yonke into ibonisa ukuba i-LG izakunikezela ngezixhobo kuthi kwi-MWC 2019, ke sinokuba nolwazi oluninzi malunga nalo kumnyhadala oseBarcelona. Kodwa okwangoku ayisiyonto eqinisekisiweyo nayo. Ke sinethemba lokwazi okungakumbi ngayo kwiiyure ezimbalwa ezizayo. Akukho datha kumaxabiso abo.
Zeziphi iimvakalelo ezenziwa zezi fowuni zintsha zivela kwinkampani yaseKorea?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-LG K40 kunye ne-LG K50: Uluhlu olutsha olusembindini ophakathi nokhuseleko emkhosini
World of Legends yiMMORPG entsha ekufuneka uyilumkele
Esi sesona sikhangeli sewebhu silungileyo kwi-Android ngalo mzuzu